» कोच प्रविशा अधिकारीको टिम कति बलियो ?
कोच प्रविशा अधिकारीको टिम कति बलियो ?
१० पुष २०७८, शनिबार १७:०१
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १० पुस । द भोइस किड्स नेपालको लाईभ राउण्डमा कोच प्रविशा अधिकारीको टिम निक्कै बलियो देखिएको छ । कोच प्रविशाका ६ जना लाईभ भिड्ने प्रतियोगीहरुमध्ये ४ जना प्रतियोगीहरुले ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचहरुको कुर्सी आफुतर्फ घुमाएका थिए । त्यस्तै बाँकी दुई जना प्रतियोगीहरु पनि निक्कै बलिया प्रतियोगीहरु रहेका छन् । यसर्थ उनको टिमले लाईभ राउण्डमा निक्कै तहल्का मच्चाउने देखिएको छ । कोच प्रविशाको टिमबाट पनि विजेता बन्ने सम्भावना निक्कै बलियो भएको दर्शक श्रोताहरु बताउँछन् ।
कोच प्रविशाको टिममा भएका बलिया प्रतियोगीहरुमध्येका एक प्रतियोगी हुन् अनुजा कडरिया । उनी द भोईस किड्समा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल पहिलो प्रतियोगी हुन् । ९ वर्षीया अनुजा बिर्तामोड झापा निवासी हुन् । त्यस्तै कोच प्रविशाको टिमको अर्का बलिया प्रतियोगी हुन् सरगम राई । सरगम द भोईस किड्स नेपालमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल पाँचौँ प्रतियोगी हुन् । ८ वर्षीया सरगम भोजपुर आमचोक निवासी हुन् । साँगितिक परिवारमै हुर्किएकी सरगमले कोच प्रविशाको टिमबाट तहल्का मच्चाउँदैछिन् ।
त्यस्तै कोच प्रविशाको टिमका अर्का हिरा हुन् पेमा दिछेन् तामाङ । यसअघि उनी कोच राजुको टिममा थिईन् । पेमालाई प्रविशाले स्टिलबाट आफ्नो टिममा पारेका थिए । पेमा द भोईस किड्स नेपालमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल नवौँ प्रतियोगी हुन् । ८ वर्षिया पेमा दार्जिलिङ निवासी हुन् । उनलाई कतिपय दर्शकहरुले कोच राजुले नचिनेको हिराका रुपमा पनि ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै कोच प्रविशाको टिममा अर्का एक प्रतियोगी पनि स्टिलबाटै आएका छन् । उनी हुन् निमेश शर्मा । उनले कोच प्रमोदको टिमबाट ब्याटल भिडेका थिए । अब उपरान्त उनी कोच प्रविशाको टिमबाट लाईभ भिड्नेछन् । निमेश द भोईस किड्स नेपालमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल सातौँ प्रतियोगी हुन् ।११ वर्षीय निमेश गौशाला काठमाडौँ निवासी हुन् ।
कोच प्रविशाकै टिमबाट सुसमी गुरुङ र श्रेयशी आचार्यले पनि तहल्का मच्चाउँदैछन् । उनीहरुले पनि कोच प्रविशाको टिमलाई बलियो बनाएका छन् । ६ वर्षीया सुसमी झापा निवासी हुन् । ४ वर्षकै उमेरदेखि गीत गाउन थालेकी सुसमी निक्कै राम्रो गाउँछिन् । त्यस्तै ७ वर्षीया श्रेयशी आचार्य काठमाडौँकी हुन् । उनी सानैदेखि गायन र नृत्यमा रुचि राख्छिन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–